Ezekiela 18: 21-28. - Ny Baiboly
Ezekiela toko 18, 21-28.
<21Ny ratsy fanahy kosa raha miala amin'ny fahotana rehetra nataony ka mitandrina ny didiko rehetra sy manaraka ny hitsiny sy ny rariny, ho velona izy, fa tsy ho faty. 22Tsy hotsarovana intsony ny fahadisoana rehetra nataony; ho velona izy noho ny fanarahany ny marina. 23Moa ny hahafatesan'ny ratsy fanahy ve no sitrako, - teny marin'ny Tompo Iaveh, fa tsy ny hialany amin'ny helony rehetra ka ho velona izy?
24Ary raha miala amin'ny fahamarinana kosa ny marina ka manao ny tsy marina, araka ny fahavetavetana rehetra ataon'ny ratsy fanahy, - moa hanao izany izy va ka ho velona? - Tsy ho tsarovana intsony ny asa fahamarinana rehetra narahany; noho ny fahadisoana nahameloka azy sy ny fahotana nataony, noho izany dia ho faty izy.
25Hianareo manao hoe: Tsy marina ny làlan'ny Tompo! Mihainoa àry, ry taranak'Israely: Moa ny làlako va no tsy mahitsy? Moa tsy ny làlanareo va no tsy mahitsy? 26Raha miala amin'ny fahamarinany ny marina ka manao ny tsy marina ary maty amin'izany, dia noho ny tsy marina nataony no ahafatesany. 27Fa raha miala amin'ny haratsiana nataony kosa ny ratsy fanahy, ka manaraka ny hitsiny sy ny rariny amin'ny ataony, dia hamelona ny fanahiny izy. 28Raha sokafany ny masony, ka miala amin'ny fahadisoana rehetra nataony izy, dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 1.0587 seconds